Mmadu ole na ole kwenyere na uzo ahia di ire nwere ike belata onu ahia ahia rue ihe ruru 70%. Ọ bụchaghị na ọ ga-achọtarịrị ọkachamara. N'isiokwu a ị ga-amụta otu esi eme nyocha ahịa na aka gị, na-enyocha ndị asọmpi gị wee chọpụta ihe ndị na-ege ntị chọrọ n'ezie. Atụmatụ aghụghọ nwere ike belata ụgwọ ahịa site na $ 5 nde ruo 1-2 nde. Nke a abụghị mma, nke a bụ ogologo oge anyị
Mgbasa mgbasa ozi ụwa na-abawanye na ọnụego nke 5.1%, na-atụ anya iru $ trillion $ 2.1 na 2019, ka McKinsey si kwuo. Dijitalụ mgbasa ozi ejikere ịfefe ihe TV na-eme na 2018. TidyMarketer amalitela usoro mkpọsa ahịa yana onye nrụpụta mgbasa ozi mgbasa ozi, kalenda mkpọsa, akụkọ akpaghị aka na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, maka ịmekọrịta otu ndị otu na ụlọ ọrụ. Ikwe SaaS na-enye ndị ahịa ohere ịhazi, ịhazi, imekọ ihe ọnụ, na ịhazi njikwa mgbasa ozi niile site na otu ikpo okwu. Ezubere ya ka
Afọ ole na ole gara aga, edere m akwụkwọ na nhazi nke otu esi dee pọọsụ site na nke m dị ka mbipụta. Otu ihe ikpeazụ m kwuru n’isiokwu ahụ bụ na ọ ga-adịrị ndị na-ege anyị ntị mkpa. Aga m aga n'ihu ma kwuo, site na mkpọtụ na mkpọtụ niile dị ebe ahụ, na enwere nnukwu ohere maka ezigbo PR iji wepu ahihia ma banye